पेटको धर्सा देखिएर लज्जित हुनुपरेको छ ? उसोभए हटाउन यसो गर्नुहोस् पर्नुहुनेछ दंग – Online Nepal
१. घ्यूकुमारीः घ्यूकुमारीलाई अचेल धेरैले एलोभेरा भन्दा चिन्छन् । एलोभेरा काटेर धर्सा परेको भागमा केही समय दल्नुहोस् । त्यसपछि मनतातो पानीले धुनुहोस् । तपाई यो प्रक्रियामा एक चौथाई एलोभेराको जेल, भिटामिन ए, इको क्याप्सुललाई आपसमा मिसाएर पनि दिनहुँ दल्न सक्नुहुन्छ । केही दिनमा तपाईले आफ्नो छालामा आएको परिवर्तन महशुस गर्नुहुनेछ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
५. आलुको जुसः धेरै किशिमका भिटामिन र खनिज आलुमा हुन्छ । यसले छालाको कोष निर्माण र उपचारमा सघाउ पुर्याउँछ । आलुलाई स्लाइसलाई जस्तै पातलो गरेर काट्नुहोस् । त्यस्तो स्लाइसलाई धर्सा भएको स्थानमा केही मिनेट दल्नुहोस् । छाला सुख्खा भएपछि मन तातो पानीले धुनुहोस् । यी पाँच मध्ये तपाईलाई जुन सजिलो हुन्छ, त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
Prevसोनिका रोकायले पारससँगको नाताबारे खोलिन् रहस्य, भनिन्, ‘मलाई रानी हुने रुचि छैन’
Nextपारस बि’रामी परेको थाहा पाएपछि सोनीकाले लेखिन यस्तो भावुक स्टाटस